बच्चाको मुखको माथि प्वा-ल देखेपछि आत्तिँदै पुगे अस्पताल, वास्तविकता खुल्दा सबैले हाे-स उड्याे ! – List Khabar
Home / रोचक / बच्चाको मुखको माथि प्वा-ल देखेपछि आत्तिँदै पुगे अस्पताल, वास्तविकता खुल्दा सबैले हाे-स उड्याे !
बच्चाको मुखको माथि प्वा-ल देखेपछि आत्तिँदै पुगे अस्पताल, वास्तविकता खुल्दा सबैले हाे-स उड्याे !
admin August 18, 2021 रोचक Leaveacomment 77 Views
बच्चाको मुखको माथि प्वा-ल देखेपछि आत्तिँदै पुगे अस्पताल, वास्तविकता खुल्दा सबैले हाे-स उड्याे ! एउटी आमाको लागि उनको बच्चाको महत्व कति हुन्छ भन्ने कुरा सारा संसारलाई थाहा नै भएकाे कुरा हाे । बच्चाको शरीरमा थोरै को-रि-यो भने पनि आमा निकै आत्तिन्छिन् ।
बेला-यतकी २४ वर्षकी एक महिलालाई पनि यस्तै भयो । बेकी स्टाइल्स नाम-की ती महिलाले आफ्ना १० वर्षका छोरा हार्वेको डाइ-पर बदल्ने क्रममा आफ्नो छोराको मुख-भित्र प्वाल देखेपछि उनको हो-स-ह-वा-स उड्यो । बच्चाको मुख-भित्र उनको तालुमा यो प्वा-ल थियो । छोरा-को तालुमा प्वा-ल देखेपछि बेकीको सा-तो गयो । उनी निकै आ-त्ति-इन् ।
उनका अनुसार प्वा-ल देखे-पछि उनले त्यो प्वा-ल छुने को-सिस गरिन् तर उनका पतिले उनलाई रो-के । महिलाले भनिन् ‘यो देखेर म काँ-पिर-हेकी थिएँ । पसिना आइरहेको थियो । हामीले टर्च बालेर पनि त्यसलाई हेर्यौं ।’ त्यसपछि बेकीले आफ्नी आमा-लाई फोन गरिन् । आमाले उनलाई १११ मा फोन गर्न भनिन् । यही बेला बेकीका पिताले उनलाई बच्चा-लाई लिएर तत्काल अस्पता-ल जान भने ।
बेकीका अनुसार अस्पता-लमा डाक्टरले हेर्नु-भन्दा पहिले एक नर्सले बच्चाको मुख खोलेर हेरिन् । बच्चाको मुखमा परेको प्वा-ल हल्का चम्किरहेको थियो । नर्सले जब नजिकै गएर हेरिन् त्यस-पछि मात्रै थाहा भयो बच्चाकी आमाले जस-लाई प्वाल सम्झिर-हेकी थिइन् त्यो एक हा-नीर-हित स्टिकर थियो जुन कुनै तरिकाले बच्चाको ता-लुमा गएर टाँसिएको थियो ।
यो एक-दमै सामान्य स्टि-कर थियो । सम्भवत, त्यो स्टिकर घरमा ल्याइ-एको कुनै सामा-नमा टाँ-सिएको थियो र पछि त्यो स्टिकर कुनै किसिमले बच्चा-को मुखमा पुगेको थियो । प्वा-लको वास्त-विकता थाहा पाएपछि बेकीले आफूलाई निकै ल-ज्जित महसुस गरि-रहेकी थिइन् । तैपनि उनले यो घ-टना अरुसँग साझा गरिन् ताकि अन्य माता-पिता यस किसिमले नझु-क्किउन् ।
महि-लाले भनिन् ‘जब म बच्चालाई लिएर अस्प-ताल पुगें त्यस-पछि हामीले नर्सलाई ढो-कामै यसबारे बतायौं । उनी-हरुले अर्को वार्डमा रिफर गर्ने कुरा गरि-रहेका थिए । यही क्रम-मा एक नर्सले म-लाई टर्च बालेर हेर्न दिनु भनिन् । करिब ३० सेकेण्ड पछि उनले यो स्टिकर हो भनिन् । उनले अब त्यो प्वाल हेर्नुस् भनिन् अनि मुखमा हात हालेर स्टि`कर निका-लेर देखाइन् ।’ साभार Dc Nepal
Previous सोचेभन्दा धेरै शक्तिशाली हुन्छन् यी चार राशि !
Next असल ईमान्दार लोग्ने को खोजीमा छु….. कोही छ ?
शारीरिक सम्बन्ध राख्न इच्छा हुदाँ महिलाले देखाउने ५ व्यवहार !
संसारभरी नै एउटा मान्यता छ महिलालाई बुझ्न कठिन हुन्छ । केटीहरु कम बोलेर धेरै कुरा …
सुत्ने बेलामा कहिल्यै नगर्नुस् यी ८ गल्ती, नत्र हुनसक्छ पछुतो
पूर्वयुवराज पारस शाह यी युबतिको प्रेममा पागल थिए, यसरी टुट्यो सम्बन्ध !
जापानमा रक्सीले मातेर बाटोमा युवतीको संवेदनसिल अंग छुने नेपाली युवा पक्राउ